China Resin chakaita zvokugadzirwa Tile fekitari uye vagadziri | CO-WIN
Resin chakaita zvokugadzirwa Tile
Resin chakaita zvokugadzirwa Tile chinhu chitsva mhando kuvaka zvinhu yakatanga nokushandisa yepamusorosoro zvemakemikari uye mushonga rwokugadzira. Resin chakaita zvokugadzirwa Tile ane unhu zhinji kwazvo zvakadai chiedza uremu, mukuru simba, isapinda uye mwando uchapupu, Anti ngura uye nomurazvo retardant, mutsindo kuputira uye zvichingodaro. Kazhinji akakodzera sandarara kukura wongoramba. Change neyemitenusirwa, wemurimi pamisika, zvitoro dzezvitoro, dzinogarwa dzokugara, itsva dzomumaruwa vagari, mukuru-mugumo dzimba, awnings, awnings, zvenhaka zvivako, etc.
The chikuru chezvinonhuwira kuti nebwe chakaita zvokugadzirwa Tile chinhu chakaita zvokugadzirwa nebwe, kureva kuti, munhu polymer mhando polymer iyo artificially synthesized. Resin chakaita zvokugadzirwa usina kukonekita zvinogona yakafukidza plastically pasi zvokunze simba, uye dzimwe nzvimbo akafanana dzinongoitika Inogadzirwa nemasiridzi anobuda mumiti.
The pose rukoko zvinhu zviri nebwe chakaita zvokugadzirwa Tile ndiyo yakaoma. Kusarudzwa pemvura rukoko zvinhu zvakananga kunokanganisa upenyu basa nebwe Tile. Kazhinji, vakaisvonaka Super kunze nemishonga zvinhu Asa kana PMMA anosarudzwa uye pakupedzisira inoumbwa pemvura coextrusion. The weatherability of chigadzirwa zvakananga zvinotungamirira hupenyu basa chakaita zvokugadzirwa nebwe Tile.
Previous: Asa chakaita zvokugadzirwa Resin Tile
Building Material Asa chakaita zvokugadzirwa Tile
Colonial Roofing usina kukonekita PVC
New Building Material Roof usina kukonekita
PVC Roof Tile chakaita zvokugadzirwa Resin Roofing Tile For Roof
PVC Roof usina kukonekita Factory
PVC chakaita zvokugadzirwa Resin Building Material Roof usina kukonekita
PVC chakaita zvokugadzirwa Resin Roofing Tile
Resin Roof usina kukonekita
Resin chakaita zvokugadzirwa Thatch
Roof usina kukonekita chakaita zvokugadzirwa Resin Building Material
Spanish Style Roof usina kukonekita
Chakaita zvokugadzirwa Resin Roofing Cover
Chakaita zvokugadzirwa Resin Royal Roof Tile
Asa nebwe Tile nenhumbi